PWHT ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူ-Post ကိုအပူကုသမှုပစ္စည်းကိရိယာများဂဟေ
ပင်မစာမျက်နှာ / PWHT စက် / PWHT ပစ္စည်း - Post ဂဟေဆော်ခြင်းကုသမှု
PWHT ပစ္စည်း-Post ကိုဂဟေဆော်အပူကုသမှု
အမျိုးအစား: PWHT စက် Tags: Post ကိုအပူကုသမှုဂဟေ, preheat PWHT, PWHT, PWHT ကိရိယာများ, PWHT ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ, PWHT ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့, pwht စက်, PWHT စနစ်က
Shipboard နှင့်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဘို့အ post ကိုဂဟေဆော် PWHT စက်, induction post ကိုဂဟေဆော်, PWHT ဂဟေ preheat စောင်, induction, post ကိုဂဟေဆော်အပူကုသမှုစသည်တို့ welding မတိုင်မီသတ္တု preheating PWHT ပစ္စည်းကိရိယာ, PWHT ဂဟေစနစ်, ထိပ်ထုတ်လုပ်သူ။
MYD ၏စီးရီး သော induction အပူ စံနစ် အသုံးပြုကြသည် PWHT, post ကိုများအတွက် ဂဟေဆော်, ကွေး, ပိုက်, အပေါ်ယံပိုင်း, သင့်လျော်, စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေး preheating ဂဟေဆော်, Pre-ဂဟေအပူ နှင့် Post-ဂဟေအပူ ကုသမှု။
ပုံစံ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များ
ပုံစံ MYD-40KW MYD-50KW MYD-60KW MYD-80KW MYD-100KW MYD-120KW
input ပါဝါ3* 380VAC (ပုံမှန်),3* 220VAC (Optional),3* 440VAC (Optional)
output ကြိမ်နှုန်း 2KHZ ~ 30KHZ
output ပါဝါ 40KW 50KW 60KW 80KW 100KW 120KW
input လက်ရှိ 60A 75A 90A 120A 150A 180A
လေအေး အပူအရွယ်အစား: ¢ 100-1500mm Size: 800 * 560 * 1350mm
DSP ထိန်းချုပ်မှု မက်စ်: 900 ℃; အပူအရှိန်: 5-400 ℃ / မိနစ် ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား: 900 * 660 * 1560mm
၆ ချန်နယ်ထိန်းချုပ်မှု 10 ခါးဆစ်အသံဖမ်း Net ကအလေးချိန်: 120kg စိတျအပိုငျးမြားနှငျ့စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 155-260kg
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ induction ကွိုင် K သည်ဒါး R-1006 အပူချိန်မှတ်တမ်းတင်
connection ကို cable ကို လျှပ်ကာစောင် Thermocouple ဆက်သွယ်မှု cable ကို
● Input ကိုဗို့အား: 380V,3အဆင့် 50 / 60HZ
● output ကိုကြိမ်နှုန်း: 2KHZ ~ 30KHZ
● output စွမ်းအင်: 2KW ~ 40KW
●အအေး - လေအေး
●အပူနှုန်း - တစ်မိနစ်လျှင် ၅-၄၀၀ ။
●အပူချိန်အပူချိန်: -30 ℃ -900 ℃
●အပူအစိတ်အပိုင်းများအရွယ်အစားအကွာအဝေး: ¢ 100-1500mmor နှင့်ညီမျှသည်
●သော induction ကွိုင် - ၁၀၄-၅၅ မီတာရှည်သောအပူချိန်ကေဘယ်လေနှင့်အအေးခံ
●အပူချိန်အသံဖမ်း: အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့6လိုင်းများ
●အပူစွမ်းအင်သုံးကိရိယာ - K အမျိုးအစား (၅-၄၅ မီတာရှည်သောကေဘယ်ကြိုး)
●အရွယ်အစား - 800 * 560 * 1350mm အသားတင်အလေးချိန် - 120kg; ထုပ်ပိုးအရွယ်: 900 * 660 * 1560mm, စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 155kg ။
အဆိုပါ ၏ option ကိုအစိတ်အပိုင်းများ သော induction PWHT ပစ္စည်းကိရိယာများ:
● induction အပူပါဝါ
●သော induction coil (Clamp induction coil) သို့မဟုတ် (Soft induction coil)
● PLC ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
● K အမျိုးအစား thermocouple & connection cable ကို
PWHT ပစ္စည်းကိရိယာများ welding MYD စီးရီးသော induction pwht ဂရန်ompare အဆိုပါခံနိုင်ရည် အပူ:
●စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း - ၃၀-၈၀%
●လေအေး - ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည် -10 40 -XNUMX at
● Induction heat power - အလုပ်ကိုအပူပေးပြီးပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စောင်ထားပါ။ ဆုံးရှုံးမှုနည်းသောစွမ်းအင်နှင့်အပူအရှိန်နှင့်အပူစွမ်းဆောင်ရည်။
● PLC ထိတွေ့မှုမျက်နှာပြင် - သိသာမြင်သာမှုနှင့်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်း။
●ပျော့ပျောင်းသော induction coil - မတူညီသောအလုပ်အပိုင်းများတွင်လေလွယ်အောင်လွယ်သည်။
●အပူချိန်ထိန်းညှိသူ - အပူချိန်လိုအပ်ချက်အသေးစိတ်ကို±3℃သည်းခံမှုနှင့်အညီအပူပေးသည်။
Applications & လယ်ကွင်းသုံးပြီး
ကျွန်ုပ်တို့၏ MYD စီးရီးအပူစနစ်က DSP စနစ်ဖြင့် Air-အအေး induction အပူပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ကြသည်။
၄ င်းတို့၏အဓိကအသုံးပြုမှုများမှာပိုက်လိုင်းအပူ၊ ကြိုတင်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ပြီးနောက်အပူကုသမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာခြင်း၊ ဆေးထိုးခြင်းမှိုအပူ၊
●အပူမတိုင်မီက - ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက်ကုတ်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊
●ဂဟေဆော်ပြီးနောက်အပူကုသမှု - တင့်ကား၊ ဘွိုင်လာသို့မဟုတ်အခြားသတ္တုအလုပ်များ
●အပူ: မှိုအပူ, သင်္ဘော, ဇင့်ရေချိုး, ကြီးမားသော & မမှန်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ
●ပိုက်လိုင်းအပူ - ပိုက်လိုင်းရေနံ၊ ပိုက်လိုင်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ပိုက်လိုင်းရေ၊ ပိုက်လိုင်းရေနံဓာတုနှင့်အခြားပိုက်လိုင်းပစ္စည်းများ
ရေနံဓာတု၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ၊ လေယာဉ်ပျံ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး၊ သံမဏိ၊ တင့်ကားများ၊ ဘွိုင်လာများ၊ ရေယာဉ်များ၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ပလတ်စတစ်ပြုပြင်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ မှို၊ ဝက်အူစည်
နံပါတျ အပူပေးစက်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများ ရုပ်ပုံ အရေအတွက် ပွောဆို
1. MYD-40KW အပူပေးစက်
3. MYD-60KW အပူပေးစက်
4. MYD-80KW အပူပေးစက်
5. 25m cable ကိုကွိုင် (လေထုအအေး) လျင်မြန်စွာအပူ
6. 25m cable ကိုကွိုင် (ရေအအေး)
7. 25m cable ကိုကွိုင် (အမြင့်ဆုံးအပူချိန်)
8. လျှပ်ကာစောင် (800 ℃ 1500 * 600 * 50mm)
9. လျှပ်ကာစောင် (800 ℃ 900 * 600 * 50mm)
10 ။ 2m cable ကိုနှင့်အတူ K အမျိုးအစား thermcouple
11 ။ Thermocouple တိုးချဲ့
12 ။ များအတွက်ဆက်သွယ်မှု cable ကို
13 ။ ER-1006
ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အပူကုသမှု preheating PWHT များအတွက် MYD သော induction အပူစက် (PWHT)
၁။ ပူးတွဲအပူနှင့်အပူကုသမှု (PWHT) - သံမဏိပိုက်လိုင်း၊ သံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်သံမဏိပြားများ
၂။ အပူပေးခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း - ပိုက်လိုင်းအရည်၊ ဓာတ်ပေါင်းဖို၊ ရေနွေးအိုး၊
3 ။ အပူစည်းဝေးပွဲကိုအပူ: ဖြစ်စေသောစပါး, ရိုးစွပ်အိတ်, အင်ဂျင်မော်တာများနှင့်မော်တာ shell ကို
(၄) ပူပြင်းခြောက်သွေ့ခြင်း - အစားအစာ၊ သတ္တု၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊
5 ။ စက်ရုံပူနွေးလာမှု: ရေနံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေအပူပေး
6. Coating အပူ: ပိုက်လိုင်း, သံမဏိဘုတ်
7 ။ အရည်ပျော်: ကြေးနီ, လူမီနီယမ်, သံဖြူ, သွပ်, ခဲ
MYD စီးရီးနှင့် MYDS စီးရီး induction PWHT ပစ္စည်းများ၏ကွာခြားချက်များ
အချက် Power က (KW) PLC အအေးအမျိုးအစား ကွိုင်အအေးခံခြင်း မက်စ်အပူချိန် Power က Size ကို ကွိုင်တာရှည်
MYD ≦ 360 10 air ကိုအအေး
preheat များအတွက် Air လေကြောင်းလိုင်း
MYDS ≦ 360 4.3 air ကိုအအေး
လေ 600 ℃ 2.5-360kw 30-80m
အချက် ယူအက်စ်ဘီ: DSP အသံဖမ်း Connector အပူကွေးသိုလှောင် ဒါး
ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေး ကွိုင် Connector
MYD စီးရီးနှင့် MYDS စီးရီး၏ induction preheat welding machine ၏အဓိကအသုံးပြုမှုများ:
အချက် Preheat ဂဟေဆော်အပူ PWHT အပူညီလာခံ ဓာတ်ပေါင်းဖိုအပူ tank အပူ ဆေးထိုး
ရေ ဓါတျငှေ့ ဆီ ပိုက်လိုင်းအရည်
MYD အကြားခြားနားချက် သော induction ဂဟေအပူပေးစက် နှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်း pad ပါအပူဒြပ်စင် (လျင်မြန်စွာအပူ)
အချက် အပူ သီးခြားထားခြင်း အပူဒြပ်စင် အပူဆုံးရှုံးခဲ့ရ အရှိန် ထိရောက်မှု တူညီနေမှု
induction တိုက်ရိုက် အတွင်း ဒီထက်ပူ နည်းသော မြင့်သော မြင့်သော နောက်ထပ်
အိုးလုပ်ငန်းနျင့်ဆိုင်သော လွှဲပြောင်း ပြင်ဘက်တွင်ရှိသော ပူသော နောက်ထပ် အနိမ့် အနိမ့် နည်းသော
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/10/Catalogue-MYD-series-heating-machine-1.pdf" title = "Catalog-MYD စီးရီးအပူစက် "]
induction ဂဟေအပူပေးစက်-induction PWHT စက်
welding ပိုက်လိုင်းစက် preheating သော induction